म्हःपूजा (आत्मपूजा/शरीरपूजा) नेवार समुदायले मात्रै गर्छन्। नेवारीमा ‘म्ह’को अर्थ हुन्छ– शरीर। आफ्नो शरीरलाई पूजा गर्नु नै म्हःपूजा हो।
शेर्पा समुदाय र पत्रकारिता
शेर्पा समुदाय विशेषतः हिमाली विकट क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र जोखिमपूर्ण पर्वतहरूमाथि विजयी हुने जाति हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर र जोखिमपूर्ण अरू पर्वतहरूको सफल आरोहण गरेका शेर्पा समुदायले पत्रकारिताको पहाडलाई भने छिचोल्न सकिरहेका छैनन् ।
करिब छ महिना अघि हुनुपर्छ, हाल सोलुखुम्बुको लिखुपिके गा.पा. वडा ४, को डुंडा निवासी इन्द्र बहादुर बस्नेतको घरमा निम्तो भयो । बस्नेत जीलाई वहाँको घर भएको ठाउँ सोध्दा ‘डुंडाको बौद्धमुनिको मेरो घर हो भन्नुभयो ।’
‘पर्यटन बर्ष २०२०’ सफल पार्न युवाको भूमिका
भनिन्छ ‘युवाहरुले चाहेमा आकाशमा भर्याङ बनाउन अनि समुन्द्रमा खेती गर्न सक्छन् ।’ ‘तर, हे युवा ! पखेटा भएर मात्रै हुँदैन, चन्द्रमा छुनको लागि त आँट र परिश्रम नै गर्नुपर्छ ।’
कुदानमा बुद्धको इतिहासमाथि हिन्दु अधिग्रहण !
हिउँदे विदा हुनै लाग्दा मेरो मनमा अनेकन सवालहरु उर्लिएर आयो । हिउँदे विदामा के गर्ने, कता जाने, कोसँग जाने, के के गर्ने, कसरी जाडो कटाउने आदि आदि । मेरो मनमा प्रश्नहरुको तुफान चल्दाचल्दै घरबाट काठमाडौं गएर वस्नु भन्ने सल्लाह आयो ।